रातो ग्रह छुनुअघिका केही अद्‍भुत तस्बिरहरू पृथ्वी आइपुगे - नेपालबहस
रातो ग्रह छुनुअघिका केही अद्‍भुत तस्बिरहरू पृथ्वी आइपुगे
९ फागुण २०७७ | १५:०४:४५ मा प्रकाशित
९ फागुन, एजेन्सी । अमेरिकी अन्तरिक्ष सम्बन्धी निकाय नासाकाे मंगलग्रहबाट उसको पर्सिभिअरन्स रोभरले पठाएको एउटा अद्‍भुत तस्बिर सार्वजनिक गरेको छ। बिहीवार खिचिएको उक्त तस्बिरमा मोटर गाडीझैँ देखिने रोबट अवतरणका लागि मंगल सतहमा झर्दै गरेको देखिन्छ। उक्त तस्बिर रोबटलाई झुलाउँदै सतहमा राख्ने रकेट क्रेडलले पठाएको हो।
मंगलबार भिअरन्सले आफूसँग ठूलो परिमाणमा विवरणहरू संकलन गरेको छ, जुन उसले क्रमैसँग पृथ्वीमा पठाउनेछ। अन्य तस्बिरहरूमध्ये एउटा भूउपग्रहबाट खिचिएको छ जसले प्यारासुटमार्फत् अवतरणको अवस्था देखाउने बीबीसी समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसले प्रविधिको अद्‍भुत सफलता देखाउँछ किनकि ‘द मार्स रिकनेसन्स अर्बिटर; नामको भूउपग्रह तस्बिर खिच्ने बेला पर्सिभिअरन्सभन्दा झण्डै ७ सय किलोमिटर पर थियो। त्यो प्रतिसेकेन्ड ३ किलोमिटरका दरले मंगल ग्रहलाई घुमिरहेको थियो।
माथिको यो तस्बिर रोभरले मंगल ग्रहको सतह छुनुभन्दा झण्डै दुई मिटरजति माथिबाट खिचिएको हो। इञ्जिनियरहरूले पर्सिभिअरन्सको अवस्था राम्रो रहेको विवरण आफूहरूले पाएको बताएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।
पर्सिभिअरन्स रोभर जेजेरो क्रेटर नाम दिइएको मङ्गल ग्रहको एउटा लक्षित सतहमा अवतरण गरेको हो। जहाँ अर्बौ वर्षअघि एउटा ताल रहेको र त्यसले जीवहरूलाई बाँच्न सहयोग गरेको हुन सक्ने ठानिएको छ।
जेजेरो क्रेटरको विस्तृत तस्बिरहरू भने अर्को साता आउनेछ जतिखेर पर्सिभिअरन्सले आफ्नो बाटो पहिल्याउने उपकरण ठड्याउने छ जसमा मुख्य वैज्ञानिक क्यामेराहरू राखिएका छन्। एउटा कार जत्रो आकार रहेको अन्तरिक्ष यानमा जीवावशेष अध्ययन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने वैज्ञानिक उपकरणहरू राखिएको छ।
छ वटा पाङ्ग्रा भएको उक्त रोभर सात महिनाको यात्रामा ४७ करोड किलोमिटर यात्रा गरेर मङ्गल ग्रहनजिक पुगेको हो। नासाले आउँदा केही दिनमा थप विवरणहरू सार्वजनिक गर्ने वाचा गरेको छ।
आज मंगलग्रह सबैभन्दा चम्किलो र ठूलो देखिने ४ महिना पहिले
आर्थिक अभावले डडेल्धुरा सेमी कभर्ड हल अलपत्र ७ मिनेट पहिले
शिक्षकले तलब नपाउँदा विद्यालयमा तालाबन्दी, पठनपाठन प्रभावित ७ मिनेट पहिले
कामना सेवा बैंकको ऋणपत्र बाँडफाँड १० मिनेट पहिले
अवैध रकम भारततर्फ जान लागेका बुबाछोरा नियन्त्रणमा १४ मिनेट पहिले
विद्यार्थी र शिक्षक एकाएक बिरामी, विद्यालय बन्द ! १७ मिनेट पहिले
इलामका स्थानीय तह इतिहास र संस्कृति जोगाउदै २२ घण्टा पहिले
श्रोत नखुलेको २५ लाखसहित २ जना पक्राउ २१ घण्टा पहिले
के तपाईको दाँत खिइने समस्या छ ? यस्ता छन्, ८ उपचार विधी ४ दिन पहिले
झरना साहित्यिक परिवारलाई हेमराज स्मृति पुरस्कार ७ दिन पहिले
हुलाक बचत बैंकको रकम हिनामिना, बचतकर्ता मर्कामा ६ दिन पहिले
एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्ड लिमिटेडको दर्ता प्रक्रिया प्रारम्भ, आइपिओ जारी गर्ने तयारी ७ दिन पहिले
आज थप ९७ जना कोरोना संक्रमित थपिए ६ दिन पहिले
खरको छानोमुक्त जिल्ला बन्दै ताप्लेजुङ ३ हप्ता पहिले
लिपुलेकको अन्तर्वस्तु १० महिना पहिले
महाशिवरात्रीका साधुसन्तलाई २४ लाखकाे भेटी १२ महिना पहिले
शिखर धवनको उत्कृष्ट प्रदशनपछी दिल्लीको शानदार जित २ वर्ष पहिले